Ny fandefasana mailaka amin'ny GPG | Avy amin'ny Linux
Hiezaka ny hanao torolàlana azo ampiharina amin'ny rehetra azo atao aho amin'ny fizarana Linux, Mac ary Windows, momba an'io lohahevitra io, fa voalohany indrindra inona no atao hoe GPG araka ny Wikipedia:
«GNU Privacy Guard na GPG dia fitaovana fanaovan-tserasera sy sonia dizitaly, izay soloina ny PGP (Privacy Pretty Good) fa ny fahasamihafana lehibe dia ilay rindrambaiko maimaimpoana nahazoana alalana tamin'ny GPL. GPG dia mampiasa ny fenitra IETF antsoina hoe OpenPGP. »
Raha manomboka miasa ianao dia mila mametraka aloha Thunderbird ary zahao raha misy gpg napetraka (apetraka amin'ny ankamaroan'ny fizarana Linux).
Ho an'ny Windows http://www.gpg4win.org/download.html
Ho an'ny Mac https://www.gpgtools.org/
Efa nametraka Thunderbird mandeha any Fitaovana fitaovana ary ao amin'ny boaty fikarohana no anoratany Enigmail, omen'izy ireo karoka ianao ary apetraka ny plugin. Tsy maintsy miverina Thunderbird hanan-kery ny fanovana.
Efa miaraka Thunderbird natomboka indray ary miaraka amin'ilay plugin mavitrika dia hiseho ny menio vaovao ao amin'ny menio, sokafy ny menio vaovao OpenPGP ary tsindrio ny mpamosavy setup.
Araho ny mpamosavy (na ataovy amin'ny tanana raha tianao), tsy misy tsara noho ny pikantsary sasany hanazava ny fomba fiasa.
Rehefa vita ny fanalahidy, dia tsara kokoa ny mampakatra azy ireo amin'ny mpizara lozisialy gpg, aza manahy, tambajotra io ary tsy maintsy mampiditra azy io amin'ny mpizara fotsiny ianao, ny hafa kosa hampifanarahina. Ho an'izay mankany OpenPGP »Fitantanana fototra amin'ny sivana avy amin'i Mpampiasa id o manan-danja, soraty ny mailakao, safidio izay voalaza ao anarana ary ao Server lehibe manome izy ireo Ampidiro ny lakilem-bahoaka, manontany azy ireo ny mpizara iray, tsy maninona izay iray omeny, ary nomeko ny antony teo aloha.
Amin'izao fotoana izao handefasana mailaka misy fanafenana dia ilaina ny manana ny lakilem-bahoaka ho an'ny mpandray. Mitady azy indray OpenPGP »Fitantanana fototra» Kitendry fitadiavana ary eo no tadiavin'izy ireo ny mailaky ny mpandray. Izao handefasana mailaka misy encrypt: D.
Manantena aho fa nampahafantatra ny tenako. Mba hitsapana ny fikirakirana dia misy ny mailaka. Manantena aho fa hahazo mailaka misy encrypted sy sonia maro. Hevitra tena tsara, satria ho fantatsika raha tena nanoratra ny mailaka ilay olona nanao sonia.
PS: Manaova kopia nomaniny ho solon'izay ny lakileninao GPG satria raha very izany ianao dia tsy ho afaka mamerina azy intsony. Ho an'izay OpenPGP »Fitantanana fototra amin'ny sivana avy amin'i Mpampiasa id o manan-danja soraty ny mailanao ary alefaso miaraka amin'ny bokotra fanondranana bokotra faharoa ny rakitra, tahirizo tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ny fandefasana mailaka amin'ny GPG
Gabriel Do Nascimento dia hoy izy:
Tena mahaliana aho, ho hitako raha ampiharina amin'ny fampiharana izany, te hiarahaba anao amin'ny Internet aho, mikarokaroka mitady vaovao vitsivitsy hitako ary mahafinaritra izany, izaho koa dia mpampiasa GNU / Linux saika roa taona
manana lahatsoratra tsara dia tsara nofaritana ianao ka hovakiko tsikelikely. Manantena aho fa hanohy toy izao izy ireo.
Valiny tamin'i Gabriel Do Nascimento
ajuradoperez dia hoy izy:
Isika rehetra dia tokony hanao sonia ny mailakantsika, farafaharatsiny. Tsy ilaina ny fanoratana raha tsy mandefa fampahalalana saro-pady isika, saingy mieritreritra aho fa ny sonia dia tokony ho amin'ny zavatra rehetra andefasantsika azy.
Niezaka nanery ny namako sy ny fianakaviako hampiasa gpg aho, saingy entin'izy ireo ho adala paranoida aho, mampionona ny fahalalana fa tsy izaho irery.
Mamaly an'i ajuradoperez
Tsy paranoia fa tokony hojerentsika raha nandefa izany ilay olona nilaza fa nandefa azy.
Fijerena fotsiny ny lahatsoratra tsotra an'ny lohateny mailaka OVERALL.
Avia, zara raha misy manao an'io ... izany hoe ireo mpampiasa (fa tsy geeks) mahita azy ho mankaleo, satria be ny litera tsy hainy.
Izany no antony tsotra kokoa ny fomba simpl
Fampianarana tena tsara ho an'ny encryption mailaka 🙂
Fampianarana tena tsara ..
Izao dia holazainay aminay ny anaran'ilay lohahevitra Windows GTK izay mitovy be amin'ny Mac
Fampianarana tena tsara, ratsy loatra ny ankamaroan'izy ireo dia tsy manafina ny mailak'izy ireo.
Ahoana ny fomba hametrahako ny Adwaita Cupertino ao amin'ny kde hampiasana azy amin'ny fampiharana gtk?
South07 dia hoy izy:
Salama, ny zavatra ampianarinao eto dia azo atao ihany koa amin'ny mailaka Hotmail sa tsy maintsy atao amin'ny kaonty Gmail izany?
Valiny amin'ny Sur07
Tsy mazava izany, azo atao amin'ny kaonty mailaka Gmail, Hotmail, Ymail, sns ...
1. Misaotra betsaka amin'ity karazana publication ity
2. Misaotra anao nampiasa "encrypt" fa tsy "encrypt" (izay nolazaina diso), na dia heveriko aza ny sasany aminareo fa niditra an-tsokosoko (zavatra mitranga na dia ao amin'ny fianakaviana tsara indrindra aza); P
3. Izaho manokana dia mety nanonona ny lahatsoratra FSF momba io lohahevitra io: https://emailselfdefense.fsf.org/es/ ary ho an'ny bokin'i Marta Peirano «Ilay boky mena kelin'ny mpikatroka ao amin'ny Internet» (fampahalalana bebe kokoa momba izany ao http://adrianperales.com/2015/11/el-pequeno-libro-rojo-del-activista-en-la-red-el-internet-de-hoy/)